Projects Factory, Suppliers - China Projects Manufacturers
Afụ Wall Isiokwu Series
Restaurant & na-eri nri ime ụlọ
Flagship Store ngosi
Flagship ụlọ ahịa window afụ mgbidi mma oru ngo customization
site ha na 18-11-16
Ahaziri mgbasa ozi mgbasa ozi maka a nnukwu flagship ụlọ ahịa dị na France, na-eji n'elu kpakpando TS-BW003 vetikal afụ mgbidi. Ngwaahịa bụ 2.2 mita elu na 8 mita n'obosara. Ọ na-mejupụtara 4 afụ mgbidi na otu obosara nke 2meters. Agbakwunye nkecha na otutu ọcha na window ngosi bụ ...
Mall ntụrụndụ ebe mmiri na-agba egwú afụ mgbidi omenala oru ngo TS-BW003
The ezumike ebe ahịa ulo a kwadebere n'ụzọ na Top Star Technology nlereanya TS-BW003, ngwaahịa size 2.4 mita elu na 0,5 mita n'obosara. The agba nke ikanam ọkụ mgbanwe na nwayọọ airflow nke egosipụta aga, nke na-aghọ a pụrụ iche mma nke ahịa, na-eke a comfo ...
High-ọgwụgwụ club mmiri na-agba egwú afụ mgbidi ngo customization ngo TS-BW002
Vetikal afụ mgbidi maka elu-ọgwụgwụ restaurant oru TS-BW003
The elu-ọgwụgwụ restaurant customization ngo adopts Top Star Technology modelTS-BW003. The ngwaahịa ogologo 15 mita, elu 0,5 mita. Ọ bụ nnọọ elu-ọgwụgwụ ikuku na-ewelite iri na gburugburu ebe obibi. N'otu oge ahụ, agba nke ikanam ọkụ mgbanwe na nwayọọ airflow nke bubbl ...
Vetikal afụ mgbidi mma ngwa oru ngo maka hotels TS-BW003
German ise kpakpando hotel korido omenala oru ngo, na-eji Top Star Technology TS-BW003 style, ngwaahịa size 3 mita elu, obosara 0,5 mita, a ngụkọta nke 13 nkeji. The pụrụ iche a haziri nke afụ mgbidi, Ikanam ọkụ mgbanwe na eruba nke egosipụta ikpokọta ike a mara mma visual mmetụta, na-aghọ ...
Now tube afụ Wall Customization Ngwa Project N'ihi Hotel TS-BW004
The US ise kpakpando hotel paseeji customization oru ngo-eji n'elu kpakpando technology nlereanya: TS-BW004 style, Now tube afụ mgbidi, ngwaahịa size 3 mita elu, obosara 1.2 mita, ngụkọta 5 nkeji, nnọọ ikuku, elu-ọgwụgwụ. The pụrụ iche a haziri nke afụ mgbidi, Nchikota Ikanam ọkụ na gen ...
Water Dance afụ Wall Office Ngwa Project TS-BW002
Office nkebi mgbidi / ihuenyo, iji Top Star technology modeTS-BW002 mmiri na-agba egwú afụ mgbidi. The ngwaahịa size bụ 2.4 mita elu na 1.2 mita n'obosara. Ọ bụ echekwa na ihe bara uru, oge a na mfe, na-eweta a visual ụtọ na-eleta ndị ahịa, ka ndị mmadụ na-eche udo na ala ...
Vetikal afụ mgbidi home ndozi ngwa oru ngo TS-BW003
Home ihe ndozi. Ọ adopts Top Star Technology TS-BW003, na a elu nke 2.4 mita na a obosara nke 1.2 mita. Ọ na-eji maka kichin na ndụ ụlọ nkebi mgbidi. Ọ bụ n'oge a na mfe, na nwere àgwà. The agba nke ikanam ọkụ mgbanwe na nwayọọ airflow nke egosipụta na-emepụta a comf ...
Vetikal afụ mgbidi home mma ngwa oru ngo TS-BW003
Home ihe ndozi. N'ịkpa Top Star Technology TS-BW003, ngwaahịa elu bụ 2.4 mita na obosara bụ 0,8 mita. Ọ na-eji na icho mma nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ọ bụ n'oge a na mfe, na nwere àgwà. The agba nke ikanam ọkụ mgbanwe na nwayọọ airflow nke egosipụta na-emepụta a ala ...
No.5 Weiye Road, Beijiao Industrial Mpaghara, Beijiao Shunde Area, Foshan City, Guangdong, China